Xaafad dhan oo mar qura Iska wada dhaaftay cabista sigaarka | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Xaafad dhan oo mar qura Iska wada dhaaftay cabista sigaarka
Himilo – In kasta oo diinta Islaamka ay mamnuucday dhuuqista sigaarka, haddana malaayiin Muslimiin ah ayaa ku dhiban nuugidda tubaakada. Balse hadda wax walba waxay u muuqdaan inay is bedelayaan gaar ahaan xaafadda Haydarbeyli, oo kamid ah Anatolia, dalka Turkiga – halkaas oo 180 daganayaasheeda kamid ah aysan cabin sigaarka.
Kuwii hore u isticmaali jirayna hadda way ka joogsanayaan, sida ay soo xigatay Daily Sabah.
Mid kamid ah dadka degaanka oo la yiraahdo Muhsin Varol, ayaa sheegay inuu sigaarka nuugi jiray muddo 13 sannadood ah kahor inta uusan iska wada dhaafin.
Madaxa xaafaddan, Rifat Eraslan, ayaa yiri; “Dadka degaanka waxay si wadajir ah isaga caawiyeen inay mar qura si tartiib ah uga go’aan dhuuqista sigaarka. Dadka Turkigu waxay taageerayaan ol’olaha ka-dhanka-ah Tubaakada.”
Yasin Uğurlu, oo sidoo kale kamid ah dadka degaanka ayaa iska dhaafay cabista sigaarka uu muddo afar sano ah soo nuugi jiray.
“Qof walba wuu og yahay dhibaatada ka dhalata cabista sigaarka, haddana qaar badan ayaa iska indha-tiraya,” ayuu yiri Yasin. “Laakiin xaafadeenna Haydarbeyli, waxay go’aansatay in dadkeedu aysan isku khilaafin ka-caaganaanta nuugista sigaarka. Si midaysan ayaana uga adkaaneynaa balwaddan halista ku ah nolosha dadka iyo degaanka,” ayuu sii raaciyay.
Hadalkiisu wuxuu u muuqda mid dhab-ka-hadal ah, waayo baakadaha sigaarku way kusii yaraanayaan jidadka xaafadda. Waana dhif iyo naadir inaad aragto haash sigaar oo dhulka yaalla.
Maayarka gobalka ay xaafaddan katirsan tahay ee Yeşilay oo lagu magacaabo Halil İbrahim Coşkun, ayaa ku bogaadiyay dadka degaanka tallaabada fiican oo ay wadajir ugu guuleysteen.
Marka loo eego Daily Sabah, waxaa jira 3.3 bilyan oo sigaarka cabta. Sannad kastana, ku dhawaad shan milyan oo qof ayaa u dhinta cudurro la xiriira ama ka dhasha cabista sigaarka.
Kuwa caba sigaarka waxay u nugul yihiin halista ah inuu haleelo cudurka Kansarka siiba kan ku dhaca sanbabada.
Marka loo eego maqaal sannadkii 2006 lagu daabacay British Medical Journal, heerka cabista sigaarku aad buu ugu sarreeyaa dunida Muslimka.
Labada dal ee Dunida Musimka ugu badan sigaar nuugista waa Yemen iyo Induniisiya. Waxaana kusoo xiga dalalka Tunisia, Turkiga iyo Guinea.
Previous: Maqal- barnaamijka Doorasho
Next: Barcelona oo £18m ka helaysa iibinta Ousmane Dembele